Ebube bụ ihe ọzọ echekwara na GIS
CAD, GIS, ma ọ bụ abụọ ahụ?
Ire ikike nke ihe ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na-esiri ike karịa ime ka onye ọrụ gọọmentị mee ntaramahụhụ ntaramahụhụ (piracy) ya mere na ọ naghị eme sọftụwia dị oke ọnụ. N'oge na-adịbeghị anya Bentley amalitela mkpọsa iji kwalite Bentley Map, na-eji arụmụka na ọ dịghị mkpa iche echiche iche iche ma ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems obodo 3D ESRI Google Earth gvSIG oS manifold GIS
Jikọọ map na teepu Excel
Achọrọ m ijikọ okpokoro Excel na eserese na usoro shp. A ga-agbanwe tebụl ahụ, yabụ achọghị m ịgbanwe ya na dbf usoro, ma ọ bụ tinye ya n'ime geodatabase. Ezigbo ihe omumu iji gbuo oge ezumike a na n'ụzọ lee ArcGIS 9.3 anya site na Acer Aspire ...
Acer nwewa manifold GIS shp
Egwuregwu na ọkwa GIS
Na-anwale ihe Manifold GIS na ụdị dijitalụ na-eme, achọpụtara m na ihe egwuregwu ụmụaka na-eme karịa ihe anyị hụrụla maka njikwa gbasara ohere dị mfe. Aga m eji dị ka ihe atụ ihe atụ anyị kere n'okporo ámá na Civil 3D. Bubata ihe nlere dijitalụ Na nke a bụ ịnyịnya ibu dị ike, ...
Kedu onye na-agaghị achọ ịnwe tebụl na-atụle ụdị GIS software dị iche iche na arụmọrụ maka nyocha iji mee mkpebi na ịzụta. Ọfọn, ihe dị otú ahụ dị na mmalite nke mmalite, gụnyere ndị na-emepụta ihe ndị a ma ama dịka AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yana ndị nrụpụta akụrụngwa dịka Topcom, Leica na ...
ArcView AutoDesk obodo 3D ESRI gps Magazines manifold GIS
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, GPS / Equipment, manifold GIS, topografia
Ngwakọta nke imecha
Nke a bụ otu esi akpọ ọrụ nke GIS iji kpochapụ esemokwu vector na ụkpụrụ ndị a na-anabatakarị na topology gbasara ohere. Ngwaọrụ ọ bụla etinyela ha n'ọrụ n'ụzọ nke ha, ka anyị leba anya na Bentley Map na Manifold GIS. Microstation Geographics Microstation gụnyere ngwaọrụ abụọ maka otu, nke arụ ọrụ site na ...
Ngwongwo ngwọta, azụmahịa dị mma
Enwere ihe mgbe ọ bụla ngwa ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ anaghị eme nke ọma, na nke a ha na-erite uru nke ndị obere iji mepụta azịza nke na-egbo mkpa ndị ahịa, n'ozuzu ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo azụmaahịa ma ọ bụ na ọ bụghị, ụdị ahụ na-atọ ụtọ, ha na-agakarị na nzukọ kwa afọ iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha; nchekwa…
innovations, manifold GIS, Microstation-Bentley, My egeomates